IPhepha loLwazi lobuGcisa beNkcubeko kwiwadi yase-Ota "i-ART yinyosi ye-HIV" vol.7 + inyosi!
Inqaku elibonisa: Ndifuna ukuhamba, Kawase Hasui (I Ngokukhawuleza ) U Imbonakalo yelizwe iDaejeon etsalwe yinyosi!
Ayisiyondawo idumileyo, kodwa kuyatsalwa imbonakalo yomhlaba oqhelekileyo.
"UMgcini weZiko loLondolozo lweMbali laseOta UMasaka (I Akho ndlela yimbi ) U Orie "
Indawo ejikeleze iOta Ward yaziwa njengendawo entle ixesha elide, kwaye kwixesha le-Edo, yatsalwa njenge-ukiyo-e ngabapeyinti abaninzi abanjengo-Hiroshige Utagawa, Hokusai Katsushika, no Kuniyoshi Utagawa.Ixesha lihambile, kwaye kwixesha lase Taisho, ushicilelo lomthi omtsha obizwa ngokuba "lushicilelo olutsha" lwazalwa.Inkokeli kunye nombhali odumileyo nguHasui Kawase (1883-1957). Ibizwa ngokuba yi "Showa Hiroshige" kwaye ithandwa kakhulu phesheya kolwandle.USteve Jobs, owazala uluntu lwangoku lwe-IT, wayengumqokeleli onomdla.
UHasui Kawase "Ikegami Ichinokura (Ukutshona kwelanga)" "Iimbono ezingamashumi amabini zaseTokyo" ngo-3
Unikezelwe ngu: Ota Ward Folk Museum
Nguwuphi umahluko phakathi kweUkiyo-e kunye neShin-hanga?
"Inkqubo yombala, ukwakheka, kunye neeprinta ezintsha zintsha. I-Ukiyo-e yoshicilelo yexesha le-Edo ikhubazekile kancinci, kodwa iiprinta ezintsha zikaHasui ziyinyani. Inani lemibala eshicilelweyo yahlukile. Kuthiwa ukiyo-e Imibala ishicilela ubuninzi bemibala engama-20, kwaye ushicilelo olutsha lunemibala engama-30 ukuya kwengama-50.
UHasui ubizwa ngokuba "ngumshicileli wohambo" kunye "nembongi yokuhamba" ...
"Xa ubuzwa into endiyithandayo, ndiza kuhamba kwangoko!" Kwingcaciso yomsebenzi wam.Uhamba nyani unyaka wonke.Ndihambile ndaya ku sketching, ndabuya kwangoko ndazoba umzobo, ndaphinda ndahamba uhambo.Ngokukhawuleza emva kwenyikima enkulu yaseKanto, siza kuhamba sisuka eShinano naseHokuriku siye kwimimandla yaseKansai naseChugoku ngaphezulu kweentsuku ezili-100. Kudala ndingekho ekhaya iinyanga ezintathu kwaye bendihamba ngalo lonke ixesha."U
Uthini ngomfanekiso weTokyo?
"UUHasui uvela eShimbashi.Oko ndazalelwa kwidolophu yakowethu, zininzi izinto ezipeyintiweyo eTokyo. Ndizobe ngaphezulu kwamanqaku ali-100.Izithili zaseKyoto naseShizuoka zezona zixhaphake kakhulu kwiindawo ezisemaphandleni, kodwa bafumana amanqaku angama-20 ukuya kwangama-30.ITokyo inkulu ngendlela emangalisayo. Ndizoba amaxesha ama-5."U
Ngaba ukhona umahluko kwintetho evela kweminye imimandla?
"UKuba sisixeko apho ndazalelwa khona kwaye ndakhulela khona, mininzi imisebenzi engabonisi nje kuphela iindawo zembali zeendawo ezidumileyo kodwa kwanendawo entle eTokyo uHasui ngokwakhe ayaziyo.Umbono ebomini, ngakumbi imizobo ebhalwe ngexesha leTaisho, ibonisa ubomi bemihla ngemihla babantu abathi ngequbuliso baqaphela."U
Kukwadume kakhulu phesheya kolwandle.
"UUkuprintwa okuqhelekileyo okuqhelekileyo kukuprintwa okungu-100-200, ubukhulu becala kungama-300, kodwa uHasui "uMagome noTsuki" kuthiwa uprintwe ngaphezu koko.Andilazi elona nani lichanekileyo, kodwa ndicinga ukuba kubonakala ngathi ithengiswe kakuhle kakhulu.
Ukongeza, iminyaka eliqela ukusukela ngo-7, i-International Tourism Bureau isebenzise umfanekiso ka-Basui kwiiposta nakwiikhalenda zokumema uhambo oluya eJapan phesheya kolwandle, kwaye kusenokwenzeka ukuba lihanjiswe njengekhadi leKrisimesi elivela eJapan lisiya koomongameli kunye neenkulumbuso kwihlabathi liphela.Oku kulindelwe kukuthandwa kukaHasui phesheya kwezilwandle."U
IHasui Kawase "Magome no Tsuki" Iimbono ezingamashumi amabini zeTokyo "Showa 5
Sebenzisa inkoliso yemizi-mveliso yokupeyinta kwiOta Ward
Nceda usixelele ngobudlelwane bakho ne-Ota Ward.
"Ota, njenge" Senzokuike "," Ikegami Ichinokura (Sunset) "," Magome no Tsuki "," Omori Kaigan "," Yaguchi ", njl.njl. "ISenzoku Pond" yaveliswa ngo-5.UHasui wafudukela eOta Ward malunga nokuphela kuka-3.Ekuqaleni, ndafudukela kwindawo ekufuphi neOmori Daisan Junior High School, kwaye emva kwethutyana, ndafudukela eMagome ngo-2.Ndichitha uninzi lomsebenzi wam wokupeyinta kwiOta Ward."U
Kufuphi nePhawu lokuDlula lwangoku lweYaguchi.Yindawo yomlambo apho abahlali banokuphumla khona. Ⓒ KAZNIKI
Ngaba ungazisa eminye yemisebenzi ebonisa iOta Ward?Umzekelo, kuthekani ngokukhetha ngokusekwe kumnandi wokuthelekisa ubuhle ngexesha lemveliso kwaye ngoku?
"Njengomsebenzi obonisa iOta Ward, kukho" uBumnyama Furukawa Tsutsumi "(1919 / Taisho 8).Umthi weginkgo eNishirokugo ubonakalisa indawo ekuMlambo iTama kufutshane neTempile iAnyo-ji, ekuthiwa yiFurukawa Yakushi edumileyo.Utyani oluhlaza olungenanto luyatsalwa, kodwa ngoku yindawo yokuhlala.
"Yaguchi ngemini enamafu" (1919 / Taisho 8) ikwayimbonakalo yoMlambo iTama.Endaweni yokuzoba iYaguchi Pass edumileyo, ndizobe inqanawa yegrabile engekho nzulu nebanzi ethwele igrabile isiya eTokyo naseYokohama.Kunika umdla ukuzoba imifanekiso yamadoda asebenza kwimozulu enamafu.Akukho sithunzi sakubonayo ngoku, kubandakanya inkcubeko yeenqanawa zegrabile.Ngaba ayisiyiyo imvakalelo ekhethekileyo yeHasui engazobi ndawo edumileyo njengoko injalo?Zombini ziyimisebenzi yonyaka we-8 wexesha laseTaisho, ke yayilixesha lokuba ndingahlali eOta Ward okwangoku.
"ISenzoku Pond" kunye ne "Tokyo Twenty Views" (1928 / Showa 3) zisenendawo entle njengangaphambili.Yinto eyakhiweyo ejonge kwi-Myofukuji Temple ukusuka kwindawo yangoku ye-boathouse esemazantsi eSenzokuike.Umbutho weWashoku Scenic usakhusela indalo, ubuhle bendawo, kunye nencasa yexesha.Uphuhliso lusaqhubeka, kwaye yayijikeleze ixesha apho izindlu zaqala ukwakhiwa ngeenxa zonke kuzo kancinci kancinci.
IHasui Kawase "iSenzoku Pond" "Iimbono ezingamashumi amabini zeTokyo" Yenziwe ngo-3
"IMagome noTsuki" kunye ne "Tokyo Twenty Views" (1930 / Showa 5) yimisebenzi ebonisa imithi ye-Ise pine.Ngelishwa ipayina ifile.Kuthiwa ngexesha le-Edo, abantu belali abatyelele i-Ise babuya nemithi yepineyitha bayityalela.Kumele ukuba yayingumqondiso weMagome.Abathathu uMatsuzuka uhlala ngasemva kweyona ndawo ingcwele yeTenso Shrine
Ukusuka eShin-Magomebashi, jonga ngakwiTenso Shrine, apho yayihlala khona iSanbonmatsu. Ⓒ KAZNIKI
"Omori Kaigan" kunye "neTokyo Twenty Views" (1930 / Showa 5) ngoku ziyabuyiselwa.Imalunga neMiyakohori Park.Kwakukho ipier kwaye yayilidokodo.Ukusuka apho, ndaqala ukuya kwifama yokhula lwaselwandle.Izilwanyana zaselwandle zaseOmori zidumile, kwaye kubonakala ngathi uBasui wayehlala eyisikhumbuzo.
Hasui Kawase "Omori Kaigan" "Iimbono ezingamashumi amabini zeTokyo" Showa 5
IMorigasaki kwi "Sunset yeMorigasaki" (1932 / Showa 7) yayiyindawo apho kulinywa khona ulwandle.Iphakathi kuka-Omori Minami, uHaneda no-Omori.Kwakukho umthombo wamaminerali, kwaye ngeentsuku zakudala, umbhali weMagome wayedla ngokuya kudlala.Indlu ebonisiweyo yindlu eyomileyo yolwandle. "
Ihlabathi elizolileyo elibonakala ngathi liHasui litsaliwe ekugqibeleni.
Ibibanjelwe kwi-Ota Ward Folk Museum ukusukela ngoJulayiUmboniso okhethekileyo "uHasui Kawase-waseJapan ujonga indawo eneeprints-"Nceda undixelele malunga.
"Isiqingatha sokuqala yimbonakalo yaseTokyo, kwaye isiqingatha sesibini kukubonakala kwendawo esiya kuyo. Siceba ukubonisa izinto ezimalunga nama-2 zizonke.
Kwisiqingatha sokuqala ungabona indlela uHasui, owazalelwa eTokyo, ayipeyinta ngayo iTokyo.Njengoko benditshilo ngaphambili, mininzi imisebenzi engabonisi nje kuphela iisayithi eziyimbali kodwa kunye neendawo eziqhelekileyo zemihla ngemihla.Uyakubona okunyamaleleyo ngoku, okusalayo njengoko bekunjalo, ubuhle bexesha elidlulileyo kunye nendlela abantu abaphila ngayo.Nangona kunjalo, uHasui, owayedonsa ngamandla iTokyo ngaphambi kwemfazwe, ngequbuliso uyanyamalala emva kwemfazwe.Kukho phantse i-90 yangaphambi kwemfazwe esebenzayo, kodwa isebenza kuphela emva kwemfazwe eli-10.Ndicinga ukuba iTokyo emva kwemfazwe itshintshe ngokukhawuleza, kwaye ndaziva ndindedwa yokuphulukana neTokyo ngaphakathi kwam.
Emva kwemfazwe, umsebenzi obonisa iOta Ward "yayiliKhephu kwiChibi laseWashoku" (1951 / Showa 26).Kukubukeka kwephuli yeenyawo yokuhlamba ikhephu.Kubonakala ngathi wayehlala ehamba emanzini echibi lokuhlamba, kwaye mhlawumbi wayenesiqhotyoshelweyo.
IHasui Kawase "Ukuhlala kwekhephu eWondoku Pond" Yenziwe ngo-26
Indawo yokugqibela endandiyizobileyo yayiyitempile yaseIkegami Honmonji e "Ikegami Snow" (1956 / Showa 31).Kunyaka omnye ngaphambi kokufa.Le yindawo ekhephu.Into yokugqibela endandiyizobileyo yayiyitempile yakudala ebizwa ngokuba yiWashokuike neHonmonji.Ndicinga ukuba ndiyizobele ngesiqhotyoshelweyo kwimbonakalo engatshintshanga kudala.Zombini zihlabathi elizolileyo njengeHasui.
IHasui Kawase "Iqhwa kwi-Ikegami" eyenziwe ngo-31
Kwisiqingatha sokugqibela somboniso, ndathatha indawo endihamba kuyo kaHasui, endikuthandayo ukuhamba ngaphezu kwayo nayiphi na enye into.Ndicinga ukuba kunzima ukuhamba ngenxa yecorona, kodwa uHasui uhamba egameni lethu kwaye uzoba iindawo ezahlukeneyo zomhlaba.Ndiyathemba ukuba ungayonwabela imvakalelo yokuhamba kulo lonke elaseJapan ngoshicilelo lwembonakalo yomhlaba olwenziwe nguHasui."U
Umgcini weMyuziyam yoLuntu yeOta.Ngo-22, wathatha isikhundla sakhe.Ukongeza umboniso osisigxina onxulumene noMagome Bunshimura, kule minyaka yangoku ebephethe umboniso okhethekileyo "Ota Ward kwi-Work-Landscape etsalwe ngumbhali / ngumzobi".
I-Kawase Hasui ngoncedo lwe: Ota Ward Folk Museum
I-1883 (Meiji 16) -1957 (Showa 32), umshicileli kwixesha laseTaisho naseShowa.Usebenze kwimveliso yoshicilelo olutsha kunye nomshicileli uSozaburo Watanabe.Ugqwesa ngokushicilela ubume bendawo kwaye ushiye imisebenzi engaphezulu kwama-600 ebomini bakhe.
Kufana nesiliphu sexesha, kwaye uziva ngathi uyabonwabela ubomi babantu abaninzi.
"UMatsuda, umqokeleli wezinto zembali zesiko lale mihla 集 (I Ukuqokelela ) U Mr. "
Uninzi lwabantu lubonile umboniso weqoqo leMatsuda "iKAMATA Seishun Burning" kunye no "Kamata Densetsu, iSixeko seMiboniso bhanyabhanya" ebibanjelwe eOta Ward Hall Aplico nase Ota Ward Industrial Plaza PiO ngexesha lomnyhadala wefilimu iKamata.UShu Matsuda, umqokeleli wempahla yeemovie ezinje ngeemovie zikaSochiku Kamata, naye ungumqokeleli weempahla zeOlimpiki.
Ukuqokelelwa okuxabisekileyo kweOlimpiki kunye noMnu MatsudaⒸ KAZNIKI
Bendihamba kwisitrato sencwadi eseleyo yase Kanda veki nganye ngaphezulu kweminyaka engama-50.
Yintoni eyenze ukuba ube ngumqokeleli?Ngaba ukhe wadibana okanye iziganeko?
"Ekuqaleni, into endiyithandayo bendiqokelela izitampu ukusukela ndisengumntwana. Into endiyithandayo kukuqokelela yonke into ukusuka kwizitampu ukuya kumathoyizi, iimagazini, amaphetshana, iilebhile, njl njl. Igama lam lokwenyani ngu" Ukuqokelela ", kodwa igama lam ngu Ndaya eTokyo ukusuka eNara ukuya eyunivesithi, kwaye ndiyazithanda iincwadi kwaye bendiye kwisitalato esidala seencwadi eKanda okoko ndangena eyunivesithi. Bendihamba veki nganye ngaphezulu kweminyaka engama-50. imbuyekezo endiye kuyo namhlanje. ”
Ubomi bomqokeleli ukusukela ndisengumntwana.
"Injalo loo nto. Nangona kunjalo, kwakumalunga neminyaka engama-30 ubudala ukuba ndiqalise ukukuqokelela ngokunyanisekileyo ukuyenza into yokuzonwabisa ubomi bonke. Ndayithenga ngokwahlukeneyo de kwaba lelo xesha, kodwa ndaqala ngokuyiqokelela ngokuzimisela. Malunga nelo xesha, ndaya Ndijikeleze kungekuphela nje isithili esidala sevenkile kodwa kwanabantu abadala baphumeza imarike. Ukuba bekufuneka ndiqhubeke le nto ubomi bam bonke, bendiyakuyenza ngonaphakade. "
I-phantom ye-1940 eTokyo yeOlimpiki yeyokuqala.
Uqale nini ukufumana impahla yeOlimpiki?
"Malunga neminyaka engama-30 eyadlulayo, phakathi konyaka ka-1980 ukuya ku-1990. Kwakukho intengiso yeencwadi ezazisetyenziswa eKanda, kwaye iivenkile ezithengisa izinto ezithengiweyo kulo lonke elaseTokyo zazisa izinto ezahlukeneyo kwaye zavula isixeko ngayo. Ndayifumana apho. Ingqokelela yokuqala yayiyiOlimpiki esemthethweni. Isicwangciso se-phantom ye-Olimpiki yaseTokyo ngo-1940. I-JOC yayingenisa kwi-IOC kuba yayifuna ukuyibamba eTokyo. Izixhobo zemidlalo yeOlimpiki yaseTokyo ngaphambi kwemfazwe. Yeyokuqala. "
I-Phantom 1940 Isicwangciso seOlimpiki sase-Tokyo esisesikweni (inguqulelo yesiNgesi) ⓒ KAZNIKI
Kwahlala kakuhle.Ngaba unayo iJOC ngoku?
"Andicingi. Kwakukho inguqulelo yaseJamani yemyuziyam yezemidlalo kwiNational Stadium, kodwa andicingi ukuba ikhona le nguqulo yesiNgesi.
Emva koko, "IZIKO LEZEMIDLALO laseTokyo le-ORIENT" lingeniswe kwi-IOC ngaxeshanye nesicwangciso.Iziko lezemidlalo laseMpuma, eli licwecwe lokubhida leOlimpiki eligcwele iifoto ezintle ezinomtsalane eJapan nakwimidlalo yezemidlalo yaseJapan ngelo xesha. "
Ngo-1940 iTokyo yeMidlalo yeOlimpiki yokuBhida iAlbham "IZIKO LEZEMIDLALO laseTokyo LAMAZWE" ⓒ KAZNIKI
Kutheni uqhubekile nokuqokelela izinto zeOlimpiki?
"Ngokumangalisayo, wakube uqokelele izixhobo zeMidlalo yeOlimpiki, izinto ezithile ezixabisekileyo ziya kuvela kwimarike yeencwadi ezisetyenziswayo. Umzekelo, inkqubo yokufumana isiJapan ngexesha lemidlalo yeOlimpiki yaseParis ngo-1924, ngo-1936 iinkqubo zokuqala zaseBerlin ngexesha iiOlimpiki, imidlalo yokuxhasa iimbaleki zaseJapan kwii-Olimpiki zase-Amsterdam zowe-1928, iiphamflethi ezazenzelwe ii-Olimpiki zowe-1940 zeHelsinki Olimpiki, ezathi zatshintshwa zaba yimidlalo yeeOlimpiki yaseTokyo ngo-1940, njl.
Kukwakho nezinto zeOlimpiki zaseTokyo zowe-1964.Amaphephandaba kumsitho wokuvula kunye nezitampu zesikhumbuzo sezigcwele.Kukwakho neposta yesiphatho setotshi esetyenziswa njenge furoshiki.UFuroshiki ngumJapan, akunjalo?Ukongeza, kukho amatikiti ovavanyo lokuqhuba lwe-Shinkansen, eyavulwa ngo-1964, amatikiti okuvula i-monorail, kunye neencwadana zokuvulwa kweMetropolitan Expressway ngokunxulumene neMidlalo yeOlimpiki. "
Xa ndiqala ukudibana, kuvakala ngathi "bendilinde ukudibana nam."
Unokufumana ulwazi oluninzi kwi-intanethi ngoku, kodwa uliqokelele njani ulwazi xa uqala ukuqokelela?
"Sele ibetha. Kukho amaxesha amane okanye amahlanu ngonyaka kwimarike yabantu abadala yokuphumeza iHeiwajima, kodwa ngokuqinisekileyo ndiya khona. Ngapha koko, ukuba kukho umsitho, ndiza kuphuma amaxesha angamakhulu namawaka, nalapho. Ndemba nganye nganye kwaye ndiyayiqokelela. Ingqokelela endiyiqokelele ngenene ngeenyawo zam. "
Zingaphi izinto ezikhoyo kwingqokelela yakho ngoku?
"Ewe, ndiqinisekile ukuba ingaphezulu kwamanqaku ayi-100,000, kodwa mhlawumbi ngamanqaku ayi-200,000. Bendibala ukuya kutsho kumanqaku ayi-100,000, kodwa andiqinisekanga ukuba inyukile kangakanani ukusukela ngoko."
Ngo-1964 uphawu lwegosa le-Olimpiki laseTokyo (ngasekunene) kunye neentlobo ezi-3 zeempawu zentengiso ezithengiswayo ⓒ KAZNIKI
Yintoni inkuthazo yokuqokelela, okanye luhlobo luni lweemvakalelo onazo?
"Ukuba uyayiqokelela ngaphezulu kweminyaka engama-50, kufana nokutya ngesiqhelo. Iba ngumkhwa wemihla ngemihla.
Kwaye, ngapha koko, uvuyo lokuhlangana.Ndihlala ndithetha nabanye abaqokeleli, kodwa imvakalelo xa ndidibana nezinto ezithile = into iyamangalisa.Kwakukho ixesha laxa yonke into yenziwe, ke kuhlala kukho abantu abakhe bayibona.Kodwa amashumi eminyaka, kwaye abanye, ngaphezulu kweminyaka eyi-100, ndichithe ixesha elingabonwayo ngabaninzi.Ngenye imini ithi gqi phambi kwam.Ke xa ndiqala ukudibana, kuvakala ngokwenene ukuba "lo mfo wayelinde ukudibana nam." "
"Kwakhona, uvuyo lokugcwalisa iindawo ezilahlekileyo. Ukuba uyaqhubeka nokuqokelela izinto, ngokuqinisekileyo uyakufumana into engenamsebenzi. Olu lonwabo luyamangalisa. Lo ngumlutha omncinci.
Kukwakho nolonwabo ukunxibelelana ngesizathu esithile.Ufunde isicatshulwa sikaRyunosuke Akutagawa kwiphephancwadi onalo, kwaye ithi u-Akutagawa wabona iqonga likaSumako Matsui * kwi-Imperial Theatre okokuqala.Emva koko, kwenzeka ukuba ndifumane izinto ezibhaliweyo kwinqanaba.Emva koko, malunga ne-100 yezinto zikaSumako Matsui zaqokelelwa ngokulandelelana. "
"Olona lonwabo lukhulu kukuphila kwihlabathi lamaphupha ... Umzekelo, ndinemathiriyeli eyahlukeneyo ye-1922 (Taisho 11) ye-Imperial Theatre eyenziwa ngu-ballerina wase-Russia u-Anna Pavlova *. Ewe, andikaliboni inqanaba lakhe. okoko ndazalwa, kodwa xa ndijonga le nkqubo ngelo xesha kunye nebromide ngelo xesha, ndifumana inkohliso yokubona elona nqanaba.Ivakala ngathi uyabunandipha ubomi babantu abaninzi, ngokungathi waphila iminyaka engaphezu kwe-100."U
Ukubhiyozelwa koxolo akufuni kuphazanyiswa.
Okokugqibela, nceda usixelele okulindeleyo kwiiOlimpiki zaseTokyo 2020 + 1.
"Kukho izinto ezohlukeneyo ezifana neziteki kunye nezitampu zokunyusa ingxowa-mali yomsitho. Kukwakhona nencwadana ebipapashwa yi-Banking Association iminyaka emine yokuvuselela ii-Olimpiki zaseTokyo ukusukela oko kwabanjwa ii-Olimpiki zaseLondon. Bekukho nencwadana ikhutshwe ngokuzimeleyo ngoorhulumente basekhaya kunye neenkampani kulo lonke elaseJapan, kwaye ibiyiprojekthi enkulu kakhulu kulo lonke ilizwe. Abantu kulo lonke elaseJapan kunye neenkampani bayiphumeze ngokuzimisela loo nto. Kungenxa yokuba yayingaphambi kwemfazwe. yenze ibe yimpumelelo, kwaye ndingakuxelela ukuba kunzima kangakanani eJapan ukuphumeza iiOlimpiki. Abanye abantu bathi kufuneka siyiyeke le Olimpiki, kodwa okukhona sifunda ngembali yeeOlimpiki, kokukhona sinokukuxelela. Uyakufumanisa ukuba ayingombhiyozo wezemidlalo kuphela. Imidlalo yeOlimpiki kufuneka iqhubeke ingayeki, nokuba yeyiphi na indlela yeeOlimpiki. Ukubhiyozelwa koxolo akufuni kuphazanyiswa.
* USumako Matsui (1886-1919): Umlingisi omtsha weqonga waseJapan kunye nemvumi.Unengxaki yoqhawulo mtshato emibini kunye nehlazo kunye nomlobi uHogetu Shimamura.Ingoma "Ingoma kaKatyusha" kumdlalo othi "Uvuko" esekwe kuTolstoy kwaye yahlengahlengiswa nguHogetsu iya kuba yingoma enkulu.Emva kokubhubha kukaHogetsu, uzibulala emva koko.
* UAna Pavlova: (1881-1931): I-ballerina yaseRussia emele ukuqala kwenkulungwane yama-20. Iqhekeza elincinci "i-Swan" ekhethwe ngu-M. Fokin kamva yaziwa ngokuba yi "The Sying Swan" kwaye yafana noPavlova.
Umqokeleli wembali yamasiko ale mihla.Umqokeleli wokwenene ukususela ebuntwaneni.Iqokelela yonke into enxulumene namasiko amaJapan anamhlanje, singasathethi ke ngeemovie, imidlalo yeOlimpiki.
Zoba amanqaku aselwandle-kwizinto zase-Ota Ward-
Unikezelwe ngu: Omori Nori Museum
Ngoku ibanjwa-ngeCawa, nge-7 kaJulayi
Imyuziyam yaseOmori Nori
(2-2 Heiwanomorikoen, Ota-ku, eTokyo)
Umboniso okhethekileyo "uHasui Kawase-waseJapan ujonga indawo eneeprints-"
[Ikota yokuqala] "Imbonakalo yeNdawo yaseTokyo" nge-7 kaJulayi (Sat) -Agasti 17 (Ilanga)
[Emva kwexesha] "Indawo ekubhekiswa kuyo" nge-8 ka-Agasti (ngoLwesine) -Septemba 19 (ngoMvulo / ngeholide)
Iholide rhoqo: NgoMvulo (Nangona kunjalo, imyuziyam ivuliwe nge-8 ka-Agasti (ngoMvulo / ngeholide) nangoSeptemba 9 (ngoMvulo / ngeholide)
Imyuziyam yase-Ota Ward
Utyelelo lweOta Museum
Ukususela kumhla wokuqala komboniso wesakhiwo ngasinye ukuya ngoLwesibini, nge-8 ka-Agasti (kude kube ngeCawa, nge-31 ka-Agasti kwiRyuko yeSikhumbuzo)
Imiboniso ekhethekileyo kunye nemiboniso ekhethekileyo iya kubanjelwa kwiholo leSikhumbuzo iRyuko, eKatsu Kaishu Memorial Hall, naseOmori Nori Museum, kubandakanya imyuziyam yalapho, ngexesha leMidlalo yeOlimpiki!
Nceda uthathe eli thuba ukonwabele ukutyelela iimyuziyam kwiOta Ward!
Umboniso okhethekileyo "uKatsushika Hokusai" Iimbono ezingamashumi amathathu anesithandathu zeTomitake "x Ubugcisa beNdawo yaseRyuko Kawabata"
Julayi 7th (Sat) -Agasti 17 (Sun)
9: 00-16: 30 (kude kube ngu-16: 00 ukwamkelwa)
Rhoqo iholide: ngoMvulo (okanye ngosuku olulandelayo ukuba yiholide yesizwe)
Abantu abadala i-yen eyi-500, abantwana ngama-250 yen
* Mahala iminyaka engama-65 nangaphezulu (ukuqinisekiswa kuyafuneka) nangaphantsi kweminyaka emi-6
IOta yeWadi evulekileyo Atelier 2021
Agasti 8 (Sat) kunye ne-21 (Ilanga)
Amagcisa athatha inxaxheba
Amaziko athatha inxaxheba
INDAWO YOBUGCISA UJonanjima, igalari iMinami Seisakusho, KOCA, ISANDO NGEZIPHAKAMISO ZEEMVUMBI nabanye
IKomiti eLawulayo yeOta Ward 2021 Atelier XNUMX
Umboniso wentsebenziswano "Ryuko Kawabata vs Ryutaro Takahashi Collection"
Ifoto: Elena Tyutina
Julayi 9th (Sat) -Agasti 4 (Sun)